ရှန်ဟိုင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်လေ့လာရေး ကိရိယာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ - Xinhua News Agency
ရှန်ဟိုင်း၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ China National Space Administration (CNSA) သည် မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လဆင်းယာဉ် Zhurong မှ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံအသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ရာ ၎င်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ် အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်းအမှတ်သင်္ကေတလည်းဖြစ်လာသည်။
ဂြိုဟ်နီကြီး၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထပ်မံရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် သုတေသနကိရိယာ ၆မျိုးခန့်ကို ယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်ထားသည်။ ထိုကိရိယာများအနက် ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်၏ ပါဝင်ဒြပ်စင်များ စစ်ဆေးရေးကိရိယာ နှင့် ရောင်ခြည်တန်းဖြင့် သတ္တုဒြပ်စင်များ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ကိရိယာ တို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပါဝင်ဒြပ်စင် စစ်ဆေးရေးကိရိယာ မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရောက်ပြီး ဇွန်၁၄ ရက်တွင်စတင် လည်ပတ်ကာ၊ နောက်တရက်တွင် ကမ္ဘာပေါ်သို့အချက်အလက်များ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့သည်။
တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ ရှန်ဟိုင်းရူပဗေဒ နည်းပညာအင်စတီကျု့မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Shu Rong က “ကျွန်‌တော်တို့ အနုတ် ၁၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ကနေ ၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အကြား အပူချိန် အပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကို စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ အဲဒီကိရိယာကို အပူအအေးပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် သိမ်းဆည်းထားမှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိရိယာဟာလွှတ်တင်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ရုတ်တရက် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၊ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းမှာကာလရှည်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှု၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးနောက် ၁၄ရက်နဲ့ ၁၄ည တိုင်တိုင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာလှည့်လည်သွားလာနိုင်မှု စတာတွေကိုကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေလည်း ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာဟာ ကျွန်တော်တို့ တီထွင်သူတွေ အများဆုံး စိတ်ပူပင်ခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကောင်းစွာ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမရှိဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ရောင်ခြည်တန်းဖြင့်သတ္တုဒြပ်စင်ပစ္စည်းများ ခွဲခြမ်း လေ့လာခြင်းကိရိယာသည်လည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့မဆင်းသက်မီ အဆိုပါ ကိရိယာအား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာအားခွဲခြမ်းလေ့လာစေကာ အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်သက်ဆိုင်သော လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားစုဆောင်းရယူစေခဲ့သည်။
“ယေဘုယျပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က လေ့လာဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုလေဆာနဲ့ ဆုံမှတ်ထားလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အေးခဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အက်တမ်ရောင်စဉ်လှိုင်းတွေထွက်လာဖို့အတွက် အပူချိန်မြင့်မြင့်နဲ့အတူ ပလာစမာရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်ရတာပါ။ အဲဒီနောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစက်တွေနဲ့ အက်တမ်‌ရောင်စဉ်လှိုင်းတွေ ကိုတိုင်းတာပြီး အရာဝတ္တုတွေဟာ ဘာအမျိုးအစားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်ခွဲခြမ်းလေ့လာကြတာမျိုးပါ” ဟုဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | How do Shanghai-made payloads help with China’s Mars mission?
The China National Space Administration (CNSA) Friday released new images taken by the country’s first Mars rover Zhurong, signifying the complete success of China’s first Mars exploration mission.
On board Zhurong, six types of scientific payloads are designed to unlock more secrets of the red planet. Among them,aMars’ surface composition detector andamineral spectrum analyzer were both made in Shanghai.